Igbo Mass Readings for November 28 2021, Ụka nke mbụ n'oge Adventi
November 28, 2021 November 27, 2021 by lectionary
1 IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ – 33:14-16
2 ABỤỌMA NA AZỊZA YA – 25:4-5, 8-9, 10, 14
3 IHE ỌGỤGỤ NKE ABỤỌ – 3:12-4:2
4 ALELUYA – Abụọma 85:8
5 OZIỌMA – 21:25 – 28, 34-36
6 Igbo Mass Readings for November 28 2021, Ụka nke mbụ n’oge Adventi – Catholic Lectionary
Nke a bụ Igbo Mass Readings maka November 28 2021, ỤKA NKE MBỤ N’OGE OLILE ANYA ONYE NZỌPỤTA – Afọ Nke Atọ
Ukwe Mbata na Ekpere Mmeghe maka Ụka nke mbụ n’Oge Adventi
IHE ỌGỤGỤ NKE MBỤ – 33:14-16
lhe ọgụgụ e wetara n’Akwụkwọ Onye Amụma Jeremaya
Isi Okwu: Aga M eme ka ngalaba ezi omume pulitere Devid
Ọ bụ Onyenweanyi na-ekwu sị: “Lee, oge na-abịa, mgbe M ga-emezu nkwa ahụ M kwere obi Izrel na obi Juda: Mgbe ụbọchị ahụ ruru, n’oge ahụ, aga M eme ka Ngalaba ezi omume pulitere Devid; Ngalaba ga-eji ezi okwu na ezi omume biri n’ala ahụ.
Mgbe ụbọchị ahụ ruru, a ga-azọpụta Juda. Ume na obi e wee ruo Izrel ala. Lee aha a ga-akpọ obodo ahụ: “Dinwenụ-Bụ Izu-Oke-Anyị!”
ABỤỌMA NA AZỊZA YA – 25:4-5, 8-9, 10, 14
Azịza: Onyenweanyị, Gị ka m na-ewelitere obi m.
1. Onyenweanyị, mee ka m mara ụzọ Gị. Biko, kụziere m ụzọ Gị. Mee ka m na-aga n’ezi okwu Gị. Kụziekwara m ezi okwu Gị, n’ihi na Ị bụ Chineke, Onye Nzọpụta m. Azịza.
2. Onyenweanyị dị mma, bụrụkwa Onye ezi omume. Ọ na-ezi ndị na-agahie agahie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị obi umeala n’ụzọ kwụ ọtọ; na-akụzikwara ndị ogbenye ụzọ Ya. Azịza.
3. Ụzọ Ya bụ ịkwụdosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edowe ọgbụgba ndụ Ya na iwu Ya. Onyenweanyị hụrụ ndị na-asọpụrụ Ya n’anya. Ọ bụ ha ka Ọ na egosì ọgbụgba ndụ Ya. Azịza.
IHE ỌGỤGỤ NKE ABỤỌ – 3:12-4:2
lhe ọgụguụ e wetara n’Akwụkwọ Ozi Mbụ Pọl dị asọ degaara ndị Tesalonịka
Isi Okwu: Ka Chineke guzosie obi ụnụ ike n’ịdị nsọ oge Kristi ga-abịa.
Ka Onyenweanyị were obi ọma mụbaa ịhụnanya ụnụ; bịakwa mee ka ụnụ hụ ibe ụnụ na mmadụ niile n’anya, otu anyị si hụ ụnụ n’anya.
Ya mee ka obi ụnụ guzosie ike n’ịdị nsọ, ka a ghara ịta ụnụ ụta n’ihu Chineke Nna, mgbe Onyenweanyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ Ya nile abịa.
Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ji obi anyị nile na agwa ụnụ; na-arịọsị ụnụ arịrịọ ike n’ime Onyenweanyị Jesu, ka ụnụ na-aga n’ihu; n’ibi ụdị ndụ ahụ a chọrọ ka ụnụ na-ebi; ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ; ụdị ndụ ahụ ụnụ mụtara n’aka anyị; ụdị ndụ ahụ ụnụ na ebi ugbu a.
Onyenweanyị mee ka anyị hụ ebere Gị. Nyekwa anyị enyemaka nzọpụta Gị.
OZIỌMA – 21:25 – 28, 34-36
lhe ọgụgụ nke a si n’Oziọma dị asọ nke Luk dere
Isi Okwu: Nzọpụta ụnụ adịla nso
Jesu gwara Ụmụazụ Ya, sị: “A ga-enwe ihe ịrịba-ama dị iche iche n’anyanwụ, na ọnwa na kpakpando.
Abịa n’elu ụwa, obodo di iche iche ga-anọ n’oke ahụhụ: bịakwa nwee oke ihe mgbagwoju anya n’ihi mbigbo nke oke osimiri na nnugharị nke ebiri mmiri.
Ndị mmadụ ga na-anwụsịsị n’ụjọ, ebe ha chị ume na obi n’aka na-eche ihe ga-eme ụwa; maka na ike dị iche iche dị n’igwe ga-ama jijiji.
Mgbe ahụ ka a ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka o ji ike na oke ebube, si n’urukpu na-abịa. Mgbe ihe ndị a bidoro mewe, kwụrụnụ ọtọ! Welitenụ isi ụnụ elu, maka na oge mgbapụta ụnụ abịala nso!
Ma kpacharanụ onwe ụnụ anya, ka ụnụ ghara ịda mba, site n’oke erimeri, na oke añụmañụ, na oke ịchọ akụ na ụba ụwa a; ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide gị na mberede dị ka ọnya. Maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọ bụla dị ndụ n’elu ụwa a.
Mụrụnụ anya! Na-ekpenụ ekpere mgbe niile, ka ụnụ nwee ike ịdị ndụ kụfee ihe nile ahụ ga-emenụ. Ma werenụ ume na obi iru ala kwụrụ chịm n’ihu Nwa nke mmadụ.
Igbo Mass Readings for November 29 202, Mọnde Izuụka nke Mbụ n’oge Olileanya Onye Nzọpụta anyị.
Igbo Mass Readings for November 28 2021, Ụka nke mbụ n’oge Adventi – Catholic Lectionary
Categories Igbo Mass Readings, Igbo Sunday Readings - Cycle C Post navigation